ओली–दाहालबीच वार्तामा केके भए सहमति ? | राजनीति | साझामन्च
ओली–दाहालबीच वार्तामा केके भए सहमति ?
अनलाइनबाट, प्रकाशित मिति : २०७४ ,पौष , २३ 21:17:32
काठमाडौं l नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आइतबार भेटवार्ता भएको छ। ओली निवास बालकोटमा भएको भेटमा पार्टी एकता, प्रदेश सरकार र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो ।
दाहाल र ओलीबीच करिब डेढ घण्टा वार्ता चलेको ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिए । वार्ताले पार्टी एकताको विषयमा छलफल गर्न सोमबार दुवै पार्टीका शीर्ष नेताको बैठक बस्ने अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘वार्ताले एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताको छुट्टाछुटै् बैठक भोलि बस्ने सहमति भयो। त्यहीअनुसार एमाले स्थायी कमिटी बैठक भोलि २ बजे बस्नेछ।'
पार्टी एकताको आधार र सिद्धान्त तयार पार्न मंगलबार पार्टी संयोजन समितिको बैठक बस्ने निर्णय भएको पनि अधिकारीले जानकारी दिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत असोजमा पार्टी एकताको निर्णय भए पनि हालसम्म सैद्धान्तिक र प्राविधिक पक्ष अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। तर आइतबारको बैठकले यस विषयमा समेत छलफल गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।
ओली र दाहालको छलफलले पार्टीको नयाँ धार तथा वैचारिक सिद्धान्त तयार पार्न समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।